Ujabulela uhlelo olusha oweDYR FM – Isambane News
Home > Entertainment > Ujabulela uhlelo olusha oweDYR FM
Ujabulela uhlelo olusha oweDYR FM
June 18, 2018 June 18, 2018 Isambane News
SamaJobe Zulu – Uthole ithuba eliyingqayizivele umsakazi weDurban Youth Radio (DYR), ozibiza ngelika-Sam Favour. USam usesakaza phakathi nezinsuku kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, uhlelo iDYR Lunch Time olungena ngo-12 kuya ku-3 ntambama. Lolu hlelo belushayelwa ngu-Njinga okuvela ukuthi usekwi-Gagasi Fm. USam ubesakaza ngoMgqibelo nangeSonto ngokubambisana noSiyabonga “DJ Worldwide” Msomi ohlelweni i-Weekend Live Show kusukela ngo-7 kuya ku-10 kusihlwa.
Lo msakazi uvalelisile kulolu hlelo izolo kusihlwa, “Ngivalelise namuhla (izolo), besekuyikhaya lokujabula,” noma kunjalo kodwa uthi uyakujabulela ukuba kuloluhlelo olusha ngenxa yokukhula. “Kunabalaleli abaningi nokukhula kanye, sengizobhekana nezinselelo ezintsha kanti ngizoba umngani wabalaleli izinsuku ezinhlanu,” kubeka yena. USam usebenza kuMasipala weTheku njenge-Project Administrator kodwa uthi inkontileka yakhe iyaphela ngoLwesibili kanti kulindeleke ukuthi aqale uhlelo olusha ngoLwesithathu. Kubukeka zimkhanyela izinto ngoba uthi akazuphazamiseka nakancane esikoleni ngoba ungena ntambama ngo-4 kuya ku-9 ebusuku eMangusuthu University of Technology.
Umphathi wezinhlelo kwi-DYR, uKevin Minter Brown, uthe bakwenze lokhu ngenxa yokuzikhandla emsebenzini wakhe, “kuliqiniso, eDYR siqeqesha intsha enkundleni yezokusakaza. Ukuze baye kweminye imisakazo emikhulu behlome ngolwazi olunzulu, uSam ubeselokhu enza umsebenzi omuhle ohlelweni lwakhe lwangempelasonto. Ngakho-ke njengoba kunomsakazi wethu obesakaza emini eye kwiGagasi Fm kube nesikhala esivulekile sabona kungcono sifake uSam kuso. Uzosakaza ngokubambisana no-Adam Knight futhi siyazi ukuthi kuzoba mnandi,” kubeka yena.
Ubhuti omncane ka-Ayanda Ncwane usengumqondisi wengqephu
Uyayihlaba uyayihlikiza eyama “Slay Queens” nama “Slay Kings” obaziwa njengomunye wabo